पकौडी लागि स्वादिष्ट आटा: फोटो संग नुस्खा
सबैभन्दा Housewives पकौडी कसरी बनाउने थाहा छ। जो सजिलो छ: पानी जोश, एक मासु Grinder मार्फत scrolled आटा, रहन मुछ्नु, र एक महान हार्दिक पकवान तयार छ। तथापि, समय यो तयारी धेरै लिन्छ। कसरी आफ्नो पकौडी सुपरमार्केट मा खरिद प्रभावित बनाउन को लागि? तपाईं भान्सा तालिका मा एक लामो दूरी बनाउन चाहनुहुन्छ, र प्लेट व्यर्थमा पारित छैन? तपाईं हाम्रो सल्लाह पालन गर्नुभयो भने, तपाईं यस्तो पकौडी, तपाईंको अतिथि सबै मेरो जीवन सम्झना र तपाईं तिनीहरूलाई कसरी पकाउन सोध्न, र परिवारमा थाहा हुनेछ जो गरे आफ्नो पकौडी - सबैभन्दा वास्तविक र सबैभन्दा संसारमा स्वादिष्ट।
सबै भन्दा राम्रो पकवान - एक घर परीक्षण देखि
अक्सर हामी तयार गर्ने पसलहरूमा मा किन्न ravioli। तर तुलना गर्न सक्छन् घर ravioli पसलहरूमा संग?! घर भराई र आटा - यो सधैं अद्वितीय छ। भरने लागि, तपाईं आफ्नै स्वाद, बस छैन मरिच र नुन मा टिप्न विभिन्न जनावर, मसला को मासु लाग्न सक्छ। आटा त पातलो र यस्तो व्यञ्जनहरु देखि आंकडा ग्रस्त गर्दैन लचिलो गर्न सकिन्छ। यसबाहेक, स्वादिष्ट कोमल ravioli लागि आटा अन्य व्यञ्जन को एक किसिम को लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। र यो धेरै गाह्रो छैन पकाउन। किन धेरै सारा महाराज आटा, खैरो inelastic र खराब clings उत्तेजित गर्दछ छ?
लागि स्वादिष्ट आटा कसरी बनाउने ravioli? यस नुस्खा धेरै सरल छ।
- गहुँको पीठो को6कप;
- 1.5 पानी ग्लास;
- नुन को 1 चम्मच।
धेरै s किताबहरु कुक वा ravioli लागि स्वादिष्ट लोचदार आटा कसरी बनाउने को सही अनुक्रम पाउन सक्नुहुन्छ तपाईं खाना पकाउने को साइटमा शायद। यो सारा महाराज वा ईन्जिनियरहरु मुख्य गोप्य लुकाउन प्रयास गर्दै भनी छैन। बस, तिनीहरूले सुझाव सामाग्री को सही अनुपात मा केन्द्रित छन्, त्यो सबैलाई एक प्राथमिकताओं स्पष्ट तिनीहरूलाई संग उपचार प्रविधि।
पकौडी लागि स्वादिष्ट आटा बनाउनको लागि, तपाईं पहिले राम्रो भोजन प्राप्त गर्नुपर्छ। यो यस्तो durum गहुँ, उच्च गुणवत्ता रूपमा कडा किसिमहरु देखि, wholemeal गर्न सबै भन्दा राम्रो छ। यो भोज लस धेरै छन्। खाना पकाउने समयमा आफ्नो उत्पादन लिम्प बन्न छैन। आटा गाढा प्राप्त गर्दैन। खैर, जो भोजन तपाईं पायो, तपाईं परिणामस्वरूप आटा रंग सक्नुहुन्छ निर्धारण गर्न। यो पिठो थियो जस्तो सेतो रहिरहन्छ भने, त्यसपछि तपाईं भाग्यमानी हुनुहुन्छ - तपाईं एउटा ठूलो भोज छ। यस्तो उत्पादनको खपत सानो छ। आटा धेरै पातलो, लगभग पारदर्शी तह मा लुढका गर्न सकिँदैन, र यो तोड्न छैन, र मात्र खण्डका। यो किसिम को आटा देखि अतिरिक्त वजन बढाउनका भयभीत हुन सक्दैन।
पीठो अक्सिजन संग संतृप्त गर्दा प्राप्त ravioli लागि सबैभन्दा स्वादिष्ट आटा। यो कसरी हासिल गर्ने? तपाईं दुई पटक एक बाल वा राम्रो धातु चलनी मार्फत पीठो चाल्नु आवश्यक छ। यो पनि, कतै लेखिएको छ, र यो एक राम्रो परीक्षण को मुख्य रहस्य छ। यो प्रक्रिया गर्न समय लिनुहोस्, र तपाईं पकौडी लागि धेरै स्वादिष्ट आटा छ। पीठो को खपत - प्रश्न सधैं ससर्त पर्याप्त छ। यो उत्पादन गुणस्तर र निहित लस मा निर्भर गर्दछ। तदनुसार, नुन र पानी राशि सधैं फरक छ।
नुन गर्न वा नुन गर्न?
तपाईं हुक्म कि स्वादिष्ट आटा पकौडी नुस्खा को Cookbook पाइने सही संख्या संलग्न प्राप्त हुँदैन। यो हाम्रो सल्लाह प्रयोग गर्न राम्रो छ। निम्नानुसार उहाँले छ। , पकाएको आटा र पानी आटा नुन थप्न र आटा पतला हुनेछ जुन। एक कन्टेनर र उबला तरल को आधा कप, र स्वाद नुन मा पोख्नुहोस्। यो एक सानो नूनिलो हुनुपर्छ। केही यसको स्वादिष्ट ravioli आटा पकाउन सोडियम क्लोराइड सबै थपियो छैन। पकवान सफल गर्न, तिनीहरूले जो पानी तयार पकौडी उसिनेर नुनीन। त्यस अर्थमा बनाउँछ। नुनीन उम्लिरहेको पानी मा आटा फालिएको भने, त्यसपछि तिनीहरूले पकाउने प्रक्रिया मा, सँगै छडी छैन र अलग गिर छैन। तर यी सावधानीहरु गहुँको पीठो को मामला मा अझ उपयुक्त छन्।
आटा को लोच
कि हटा भने प्राप्त ravioli लागि सबैभन्दा स्वादिष्ट आटा अप केही समय छान्न र टेबल मा फेंक छ। तपाईं पनि यस प्रविधी, आटा, प्रयोग गर्नुहुन्छ भने गहुँ हुनत यो कुरूप खैरो हुनेछ, राम्रो लोच प्राप्त। नुस्खा स्वादिष्ट आटा पकौडी अन्डा समावेश गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीं यो गर्न अन्डा सेतो थप्न, तर आवश्यक छैन, न त कहिलेकाहीं पीठो एक कचौरा मा खन्याउन सल्लाह छ जो तेल, थपिएको हुनुपर्छ सल्लाह। एक क्लासिक नुस्खा मात्र पानी, पीठो, र कहिले काँही हुन्छन् - नुन। भोजन सधैं लस छ। यो एक अलग संख्या हुन सक्छ, तर यो सधैं वर्तमान छ। यो उत्पादन पानी आफ्नो गुण देखाउन लागि थपिएको छ। आटा को सबैभन्दा ठूलो लोच बस vylezhu पछि 20-30 मिनेट को लागि एक सुन्दर ठाउँमा मिश्रण पछि लाग्छ।
सिक्न र herein disclosed रहस्य मास्टर, तपाईं पक्कै ravioli मदिरा लागि स्वादिष्ट आटा पकाउन प्रयास गर्नुपर्छ। उसलाई थोडा गाह्रो गर्न। तर, यो पक्कै पनि पकाएको गर्न योग्य हुनुहुन्छ। सहायता चित्र, एउटा लेख मा राखिएको आउँछन्। तिनीहरूले बिस्तारै पकौडी लागि स्वादिष्ट आटा कसरी खाना पकाउनु देखाउँछ।
ग्लास करछुल आधा कप खन्याउन उसिनेर पानी र नुन को एक चम्मच खन्याउन। हलचल राम्रो, पानी उम्लिरहेको एक राज्य एक माइक्रोवेव ओवन वा एक प्लेट मा पानी ल्याउन।
एक कचौरा मा राम्रो-sifted पीठो तीन पूर्ण चश्मा पोख्नुहोस्। पातलो धारा, निरन्तर जगाएर नूनिलो Boiling पानी यसलाई मा, खन्याउन। हामी कुनै गांठ गठन ताकि यसलाई बनाउन प्रयास गर्नुपर्छ। हामी एक एकदम homogeneous तरल कुटपिट हुनुपर्छ। यदि अझै पनि गांठ वर्तमान, एक ब्लेंडर तिनीहरूलाई तोड्न।
आटा थप पीठो एक कचौरा मा पोख्नुहोस्। यसलाई निरन्तर जगाएर, अक्सर गर। तपाईं एक चम्चा यसलाई के सम्म, त्यसपछि सम्म पीठो र चलाउनु थप्नुहोस्। आटा पर्याप्त बाक्लो छ र यो एक चम्चा कठिनाई संग घुम्ने गर्दा बरु तालिका मा पीठो एक मोटी पत्र खन्याउन। यसमा आटा राखे। यो चरण मा, यो अझै पनि धेरै, टाँसिएको त skimp छैन छ। आटा आवश्यक रूपमा धेरै पीठो हुनेछ।
सामान्य तरिकाले आटा मुछ्नु। यो तालिका र पीठो खन्याउन समय लीन गर्दैन निश्चित गर्नुहोस्। यसलाई अब छडी छ भन्ने महसुस रूपमा लामो समय को लागि यो। पकौडी लागि स्वादिष्ट आटा न पनि गाह्रो न त धेरै नरम हुनुपर्छ। यो चरण मा, यो बारेमा 15-20 पटक तालिका बन्द पिट्न आवश्यक छ।
आधा एक घण्टा समाप्त आटा खाना र्याप प्लास्टिक र्याप र स्थान फ्रिज मा। यो समयमा, यो settles र आवश्यक लोच पाउन हुनेछ। 30 मिनेट पछि, यो हटाइएको र पकौडी मोडेलिंग गर्छन् गर्न सकिन्छ।
Sculpt, र घर ravioli हामी सेवा तालिका मा खाना पकाउन
पीठो को पातलो पत्र संग तालिका छिडकना। पहिलो, रोल एक ससेज मा आटा बाहिर सजिलो र धेरै टुक्रा मा कटौती। लिन एक टुक्रा र रोलिंग पिन प्रयोग गरेर, धेरै पातलो तह मा रोल। ग्लास वा कट स्लाइस, भराई को केन्द्र मा स्थान अन्य फारम र किनारा अप बन्द गर्नुहोस्।
पकौडी एकैचोटि पकाएको गर्न सकिन्छ, र स्थिर र आवश्यक रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। आटा नूनिलो भएकोले, नुन पानी छैन आवश्यक छ। खाडी पात र सुकेको अजवायन वा तुलसी को चिम्टी राखेँ। पानी फोडे गर्दा उनको पकौडी मा ड्रप। तिनीहरूले तल छडी छैन कि त हलचल। सतह गर्न उत्पादन जोश र वृद्धि गरेपछि 5-10 मिनेट पकौडी को आकार मा निर्भर लागि simmer। आटा को भराई गर्न चिपके भएको एक सानो शिकन छ जब उनि तयार हुनेछ: तिनीहरू देखावटी हुनेछैन र राउन्ड, तर अलिकति तरंग।
एक slotted चम्चा संग पकौडी हटाउन र प्लेट मा व्यवस्था। तालिका घिउ र खट्टा क्रीम मा राखे। प्याज संग saucers, पातलो आधा-छल्ले मा कटौती र प्राकृतिक फल सिरका भर बारे मा भूल छैन।
आटा तयार छ जब केही कारणले तपाईं पकौडी दिन बनाउन सक्छ भने, यो settles त्यसपछि पछि फ्रीजर मा ठाँउ हो। केही उहाँलाई हुनेछ। उत्पादन आवश्यक छ, बस कोठा तापमान मा यो Thaw, र यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
अरू के मालपुवा मुछेको तयार हुन सक्छ?
हाम्रो आटा हुनत यो पकौडी, वा अखमिरी अखमिरी भनिन्छ, पकौडी लागि मात्र होइन उपयुक्त छ। यसलाई पूर्ण chebureks, strudels, पकौडी र धेरै अन्य व्यञ्जन लागि उपयुक्त छ। यो cannelloni तयार पनि सम्भव छ। राम्रो गहुँ बनाइएका, यो चिकन शोरबा मा beshbarmak र चाउचाउ लागि उपयुक्त छ। हाम्रो परीक्षण तिनीहरूले निस्कनु र टाँस्न भनेर डर हुन सक्दैन कि यस्तो चेरी, ब्लूबेरी वा अन्य जामुन संग पकौडी रूपमा मीठा व्यञ्जन, लागि जाँदा। यो पनि उपवास समयमा प्रयोग किनभने त्यहाँ कुनै अन्डा वा डेयरी उत्पादन।
यो परीक्षण देखि धेरै स्वादिष्ट केक। तिनीहरूले तिल बीउ, सन वा अन्य संग छर्कियो भने, एक उत्कृष्ट विनम्रता, छुट्टै पकवान रूपमा फिट हुनेछ जो थियो। यी केक दूध तल धोए। यो धेरै स्वादिष्ट छ।
तिनीहरू के र सुन्दर रोल र भराई लिफाफें। यस मामला मा, पातलो तह मा आटा रोल यो मासु, यस्तो burritos रूपमा तरकारी वा नरम चीज, को भराई मा राख्नु र, एक साथ पैन, को राखे कागज राखेर वनस्पति तेल वा ओवन बिना भुट्नु पैन र्याप गैर-स्टिक कोटिंग।
हाम्रो विस्तृत निर्देशनहरू तपाईंलाई पकौडी लागि धेरै स्वादिष्ट आटा गर्नेछ। पारंपरिक लागि र कस्टर्ड लागि नुस्खा उत्पादनहरु नै नम्बर समावेश र पहिलो मामला मा, चिसो उसिनेर पीठो पानी संग पतला मात्र अलग, र दोस्रो - तातो।
दलिया: स्वादिष्ट र स्वस्थ व्यञ्जन लागि व्यञ्जनहरु
एक steamer मा काउली
काउली लागि व्यञ्जनहरु
कसरी घर मा ट्राउट spawn अचार, तपाईं यस लेखमा सिक्नेछौं
Burbot - व्यञ्जनहरु। Burbot व्यञ्जन - व्यञ्जनहरु
Spathiphyllum: लक्षण र अन्धविश्वासको
"Aertal": प्रयोगको लागि निर्देशन। सस्तो एनालग "Aertala"
Heather मह: रोपण र हेरविचार
घूस के हो? सम्भावित परिणाम
कोपेनहेगनको सुन्दर शहर - डेनमार्कको राजधानी र एक ऐतिहासिक स्मारक
बच्चाहरु र वयस्क लागि घरेलू खेल सुविधाहरु। आफ्नै हातले छोराछोरीको खेल जटिल घर